Ahoana no hividianako rindran-damina EDU?
Efa an-taonany maro aho no tao amin'ny indostrian'ny Search Engine Optimization, noho izany dia takatro ny fiverenan'ny EDU manan-danja sy matanjaka, indrindra raha mikasika ny fanentanana fananganana rindran-kaonty. Eto ambany eto aho dia hizara tetik'asa iray mahomby tsy hividianana rindran-damina EDU, fa manamboatra azy ireo amin'ny tenany manokana nefa tsy mandany dollar. Alohan'ny hamafisantsika lalindalina ny raharaha, dia mbola hisy famaritana kely ihany, mbola manan-danja ihany.
Andao hiatrika izany - Tsy afaka mividy EDL backlinks ianao. Mazava ho azy, tsy ianao ihany. Fa noho ny tsy fahafahana eto mba hahazoanao izay ilainao fotsiny handoavana ny vola takiana ho setrin'izany. Midika izany fa raha tokony hilaza aminao ny fomba hividianana rindran-damina EDU ianao, dia hampiseho aminao torolalana fohy izay nahazatra aho nahavita nahazo ny rohy sarobidy 14 mandritry ny telo volana - fampiasana vatsim-pianarana.
Targeting Tarika Mifaninana
Ny famantatra ny mpihaino manana tanjona mifanentana amin'ny foto-kevitrao no zava-dehibe tokony hatao alohan'ny zavatra hafa. Ataovy azo antoka fa mifindra eny amin'ny làlana marina hatrany am-piandohana ianao. Eritrereto tsara ny "mpanentana tsara" anao mba hiresahana ny mpihaino. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny hampifantoka ny programa momba ny vatsim-pianarana amin'ireo mpianatra liana, indrindra amin'ny ankapobeny dia miavaka amin'ny sehatry ny varotra, ny varotra ary ny dokam-barotra.
Ity karazana votoatin-javatra ity dia mora ny mivoatra, na dia azo antoka aza fa manana ny zava-drehetra. Diniho ireto tsipiriany manan-danja manaraka ireto momba ny pejy vatsim-pianaranao:
mamintina fohy momba ny orinasa;
mahazo ny pejy vaovao misy ifandraisany amin'ny pejy fandraisam-peo sy ny sisa amin'ireo pejy fototra hafa izay mila sira mifandraika bebe kokoa;
miasa tsara ao amin'ny sehatr'ity fizarana andraikitra ity, ataovy azo antoka ny milaza ny mpiasanao tariby ho mazava sy araka izay azo atao;
dia mamaritra ny sandan'ny volavolan-dalàna izay ahafahanao mahazo vola ho an'ny tetibolanao (matetika eo anelanelan'ny $ 500 sy $ 1000), ary aza misalasala amin'ny fanomezana valisoa azo raisina, na koa tsy hahasarika ny orinasam-pampianarana manan-danja;
dia manome sehatra fampiharana amin'ny antsipiriany rehetra (i. f. , fanekena fizarana fohy na valin-kafatra video, fe-potoana, andro fandraisam-bahiny), arahina amin'ny endrika fifandraisana amin'ny farany amin'ny faran'ny pejy.
Ny zavatra dia tsy voatery ho manana lisitra manan-danja ny page dot EDU ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny EDU. Raha toa ka mitranga izany dia misy fomba roa samihafa fikarohana mifandraika - mivantana amin'ireo fitaovam-pikarohana mampiasa fitaovana an-tserasera mba hanamarinana ny sehatr'asa momba ny sehatra, na hanitarana ny lisitry ny rohy miaraka amin'ny fitaovana fanodinana ho an'ny pejy vatsim-pianarana miaraka amin'ireo pejy hafa hafa mifandraika amin'ny EDU dot. Raha vantany vao vita ny zava-drehetra, dia ataovy izay hahazoana ny fampahalalana rehetra ao amin'ny pejin'ny mainanao.
Ny famantarana ny olona mifandray marina dia ny hany fomba hitarihana ny mpiasa ao amin'ny oniversite sy ny oniversite. Eritrereto ny mametraka fifanakalozan-kevitra mety amin'ny alalan'ny hafatra tsotra mivantana arahin'ny mailaka, na ny mailaka imailaka. Azonao atao ihany koa izany amin'ny alàlan'ny taratasy fangatahana nangatahana antsipirihany momba ny fifandraisana. Amin'izany fomba izany, tsy maintsy mandefa ny tsipiriany momba ny vatsim-pianaranao ianao rehefa nahazo valiny mahafa-po avy amin'ny oniversite na oniversite. Raha ny marina, rehefa navoaka ny vatsim-pianarana dia tokony omena fampahafantarana ianao. Raha izaho kosa, dia nataoko maivana kokoa ity fomba ity tamin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera roa mba hanaraha-maso ny backlinks.
Boka vitsy kokoa:
Mariho fa ny rohy amin'ny EDU dia manana litera endri-tsoratra samihafa izay avy amin'ny loham-pahaizana tena izy, na naoty URL.
Andramo ny fandefasana ny tranokalanao any amin'ny birao karazana vatsim-pianarana.
Ataovy azo antoka fa misy ifandraisany amin'ny làlan-kizorana manokana sy mifono hevitra.
Fantatrao tsara, vitsy ny vatsim-pianarana dia midika fa mividy efamira EDU ianao, ny hany fomba hahazoana azy Source . Raha ny zava-misy, dia mbola tsy tonga dia mandoa vola tokana, sa tsy izany?